Sida loo joogteeyo xiriirka masaafada dheer | Ragga Stylish
Maaha kiiskii ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay, halkaas oo laba qof Waxay isku dayaan inay ilaaliyaan xiriirka meel fog. Jacaylku wuxuu u muuqday si isdaba-joog ah oo wanaagsan wuxuuna sameeyay laba qof ma rabto inaad joojiso sii wadida xiriir dhow, oo isku lifaaqan isla markaana aan dayacin dayaca. Waxaa la joogaa waqtigii miisaanka la soo saari lahaa oo la tixgelin lahaa in xiriir sidan loo qaadi karo iyo in kale.
Ma jiraan sharciyo caalami ah oo awood u leh in la hirgeliyo caadooyin taxane ah oo si sax ah u suurtagal noqon kara. Qof kastaa wuxuu yeeshaa shakhsiyad ka duwan, qaabkan kuma bilaabi karno inaan dhahno waxay wax shaqeeyaan iyo waa inay si adag ugu shaqeeyaan si wanaagsan hal qaab. Waa in qiimee habka noloshaada iyo qofkaas, hadaad rabto xiriir fog waa inuu shaqeeyaa.
1 Xiriirka masaafada dheer ma shaqeeyaa?
2 Ha ku qaadin murugo
3 Waa inaad ilaalisaa iskuxirka
4 Dhibaatooyinka suuragalka ah ee soo bixi kara
5 Aqbal xiriirka oo raadi talada ugu fiican si aad u ilaaliso
Xiriirka masaafada dheer ma shaqeeyaa?
Iyada oo daacadnimo dhab ah, xiriir fog oo fog waxay u badan tahay inaysan yeelan doonin dhammaad farxad leh. Haddii cilaaqaadka la adkeeyay oo aad leedihiin xiriir aad u culus oo suuragalnimada inaad malayso inaad tahay qofka ugu habboon, Hababka iyo dariiqooyinka ayaa had iyo jeer la raadin doonaa si jacaylkani ugu dambayn ugu soo dhammaado isu imaatin si adag oo dhow.
Waxaa jira habab lagu kobciyo xiriirkaas, sida ay yihiin tiknoolajiyada waaweyn ee maanta, taas oo naga caawin karta inaan ilaalino saaxiibtinimo iyo la-hawlgalayaal badan. Waxay noo oggolaan doonaan inaan ku xirnaano waqti kasta oo maalinta ah, oo leh farriimo, wicitaanno fiidiyoow iyo dirista sawirro, wax aan macquul ahayn dhowr sano.
Sida laga soo xigtay daraasad ay daabaceen Jaamacadda Hong Kong (Shiinaha) iyo Cornell (USA), waxaa lagu soo gabagabeeyay in la sii wado xiriir fog xitaa waxay noqon kartaa mid miro dhal badan oo guuleysata, Tan iyo markii aan nahay gacan ka geysanaya kor u qaadida xiisaha iyo rabitaanka ku beerlaxowsiga "ujeedo joogto ah ee qofkaas."
Xogtaan waxay bixin kartaa xog rajo wanaagsan leh, laakiin dadka oo dhami ma wada hayn karaan maskaxdaas qaab dhexdhexaad ah, maaddaama aysan culeyska ka qaadi karin rabitaankaas oo aysan awood u yeelan karin inay si dhaqso ah ku rumeeyaan.
Ha ku qaadin murugo
Waxaad go'aansatay inaad aqbasho xaalada xiriirkiina waa inuu qaataa ka bilow saaxiibtinimo si xushmad weyn leh. Isku day inaad ka saarto fekerka joogtada ah ee qofkaas, maxaa yeelay hadda Waxaa la joogaa waqtigii la higsan lahaa dhammaan hiwaayadahaas iyo khibradahaas in aadan horey u sameyn kareynin waqtiga aad la qaadatay lamaanahaaga.
Taasi waa sababta samirka sii joogtee wajahay xaalad caynkaas ah oo raadso ogow sida loo joogteeyo jadwalkaaga Waa aaladda ugu fiican ee lagu waafajiyo xaqiiqadan.
Waa inaad ilaalisaa iskuxirka
Waa inaad qiimeysaa curaartaas ku haysa, ku lifaaqan, farxad iyo habka wax dhiska ee xiriirkaas ka dhigaya mid qiimo leh. Haddii aad runtii dareento raaxo, ixtiraam iyo qiimeyn qofkaas, markaa Looma baahna in dib loo eego mar kale. Haddii dib u midow la filayo muddada dhow, dhexdhexaadka ama muddada dheer, halkee ku wada joogi kartaan, taas waa la qiimeyn karaa. Waxa muhiimka ah waa dhiirigelinta la filayo lamaanaha kale, maalinta aad is aragtaan.
Dhibaatooyinka suuragalka ah ee soo bixi kara
Fikrado rajo xumo ayaa laga yaabaa inay soo muuqdaan, in mustaqbalka fog aan ka fekereyno xiriir aan mustaqbalka sii jiri karin. Fikradahan ayaa soo baxa dan la’aan darteed in aan tuuri karo labada midkood, ballanqaadka weyn, oo sida muuqata labada qof midkood ayaa arkaya.
La'aanta daqiiqado isu dhawaansho, salaaxid iyo inaad naga dhigto mid wanaag ku ah qofka kale, waa xaqiiqooyin mustaqbalka fog miisaamaya, in aan lagu hodmin karin waxa aan dooneyno. Anaga waxay u baneeysaa niyad jab iyo jahwareer in wixii aan ka filaynay qofkaas aan la gaarin.
In kasta oo xanuunka joogtada ah ee qofkaas uusan ag joogin, haddii jacaylku xoogan yahay, waxaa jira lamaanayaal ku dadaala inay wada hadlaan oo dareema daqiiqadahooda isku dhawaanshaha.
Aqbal xiriirka oo raadi talada ugu fiican si aad u ilaaliso
Haddii isbedelkan uu sababay wax lama filaan ah waa inaad aqbashaa isbedelada. Mar dambe ma sameyn kartid wax la mid ah sidii markii hore, markaa waa inaad sameysaa raadso moodooyin cusub iyo waxyaabo kale oo beddela si ay u shaqeeyaan.
Waa inaad si cad oo sax ah u hadashaa dhammaan daqiiqadaha aad ku leedahay kulankaaga hadalka. Waa wax aad u wanaagsan si daacad ah ula hadal oo u muuji qofka kale wixii ku dhaca, walaacyadiisa, ku xirnaanshihiisa, qorshayaashiisa mustaqbalka, maalmihii murugada badnaa ...
Sidaa darteed waain xaqiiqda ah in xiriirada la qiimeeyo lana xoojiyo, sameeyaa saameyn saaxiibtinimo oo weyn ayaa la abuuray, wuxuuna xoojiyaa wax kasta oo ku mideeya, sida riixitaan, soojiidashadaas quruxda badan iyo isku xirnaanta ee ku mideeya, aaminaada, daacadnimada ...
Ha dareemin culeys, miisaanka haddii aad isku aragto nooca kale ee xiriirka adiga oo aan masaafo lahayn. Marar badan cilaaqaadyo adkaysi leh, kuwa kaaga baahan inaad maalin kasta is aragtaan iyo caadadiina, ha sal dhigin aasaas kale oo aan caajis ahayn. Haddii aan soo saarno dhinaca wanaagsan ee xiriirka fogaanta fog waxaan xoojin karnaa jacaylka iyo tamarta galmada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ilaaliyo xiriirka masaafada